Realme C3 Frozen Blue (3GB/32GB) ~ ICT.com.mm
HomeRealme C3 Frozen Blue (3GB/32GB)
Realme C3 Frozen Blue (3GB/32GB)
Display: 6.52inches Resolution: 1600×720 CPU: Octa Core Chipset: Helio G70 Memory: 3GB(RAM) Internal Storage: 32GB (ROM) Rear Camera: 12MP Front Camera: 5MP SIM: Dual SIM (Dual Nano-SIM) (4G+4G) Battery: 5000mAh OS: Android... [Learn more]
Brand: RealmeSKU: 156826N/ASee more: Mobile Phone, Mobile Phones, New Arrivals, Products, RealmeFilter by: outofstock, Smartphones
SIM: Dual SIM (Dual Nano-SIM) (4G+4G)
‘Entry Level’ အဆင့် စမတ်ဖုန်းကိုမှ Apps တွေတပြိုင်နက်အသုံးပြုတတ်ပြီး တောက်ပတဲ့ရုပ်ထွက်နဲ့ အသုံးပြုချင်သူတွေအတွက် ထုတ်လုပ်ပေးထားတဲ့ Realme C3 စမတ်ဖုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ထည်ပိုင်းမှာ အပေါ်မျက်နှာပြင်အတွက် Corning Gorilla Glass3ကိုတပ်ဆင်ထားပြီး ဘေးဘောင်နဲ့ နောက်ကျောကာဗာအတွက် ပလတ်စတစ်ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ အတွင်းမှန်မျက်နှာပြင်အတွက် IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors ကို အသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား 6.5” နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် အရွယ်အစားကြီးမားတဲ့ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပြီး Resolution အားဖြင့် 720 x 1600 pixels ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင်တောက်ပမှု Brightness – 480 nits ရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ ကြေညာထားတဲ့အတွက် တောက်ပတဲ့ရုပ်ထွက်နဲ့ မြင်တွေ့ရမှာပါ။ OS အဖြစ် Android 10 နဲ့ မောင်းနှင်ပေးထားပြီး User Interface အဖြစ် realme UI 1.0 နဲ့ အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ System ပိုင်းမှာ Mediatek Helio G70 (Chipset), 2.0 GHz Octa-core (Processor) နဲ့ Mali-G52 2EEMC2 (GPU) တို့ကို တွဲဖက်တပ်ဆင်ပေးထားတဲ့အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ Internal Storage – 32GB ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး ဆင်းမ်ကတ်နှစ်ကတ်အပြင် သီးသန့် SD ကတ်လည်းထည့်သွင်းလို့ရတဲ့အတွက် Storage ထပ်မံတိုးမြှင့်နိုင်မှာပါ။ RAM 3GB ဖြစ်တဲ့အတွက် Apps တွေကို အဆင်ပြေပြေ တပြိုင်နက် အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဂိမ်းအမြင့်တွေကိုတော့ ကစားလို့မရနိုင်ပါဘူး။ (Facebook, Viber တို့လို့ ပုံမှန် Apps တွေကို အဆင်ပြေပြေ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ RAM 2GB ဗားရှင်းဖြင့်လည်း ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်) နောက်ကျောကင်မရာစနစ်အဖြစ် 12MP (wide) +2MP (depth) စုစုပေါင်း ကင်မရာနှစ်လုံးကို တပ်ဆင်ပေးထားပြီး HDR နဲ့ Panorama တို့ကိုလည်း ထောက်ပံ့ပေးထားတာကြောင့် ကြည်လင်လှပတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို ရိုက်ကူးပေးနိုင်ပါတယ်။ ရှေ့ဘက်မှာ 5MP (wide) Selfie ကင်မရာကို တပ်ဆင်ထားပြီး HDR နဲ့ Panorama တို့လည်း ပါဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် လှပသပ်ရပ်တဲ့ Selfie ပုံရိပ်တွေကို ရိုက်ယူနိုင်စေမှာပါ။ ဘတ္ထရီအတွက် 5000mAh ဘတ္ထရီအမျိုးအစားကို တပ်ဆင်ထားပြီး 10W Charging Adapter နဲ့ အားသွင်းပေးရမှာပါ။ အရောင်ကွဲအဖြစ် အနီရောင်နဲ့ အပြာရောင် တို့ဖြင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ အာမခံတစ်နှစ်သက်တမ်း ပါဝင်ပါတယ်။
It features an12MP + 2MP | 5MP Front Camera, withabuilt-in screen flash that will help you take beautiful pictures even when the lighting is poor. The phone hasa32GB 64 ROM variants with memory expandable up to 256 GB,Packed with an octa-core Helio G70 AI processor and has3GB and4GB of RAM respectively to ensure seamless performance.
Get ready for longer duration of entertainment the phone featuresa5000 mAh Battery for more juice and power in your phone. With good battery life on Dual SIM and great hardware under the hood, this smartphone can handle processing of daily tasks easily.